Kuratidza zvinyorwa neelebheri dzimba
Hornis Mísečky akasvibiswa
Nzvimbo yekuvaka yeP Horní Mísečky, kunyangwe ipaki yenyika. Kambani yekuvandudza yePrague yakavaka zvivakwa zvitanhatu zvihombe zveimba uye iyo zvachose uye irrevocally zvakashatisa zvakasikwa hunhu uye chimiro chimiro kune zvizvarwa zvinotevera. Kusaratidza kuri pachena kusada kwe Ministry of the Environmental uye kusaremekedza kwainge kwakaita nzvimbo kwakaita kuti mugadziri pamwe nevamiriri vedzimba kuvaka zvivakwa zvemafafitera mune nzvimbo yeKrkonoše National Park, iyo ikozvino yaparara zvisingadzoreke nedzimba dzakaipa kuzvizvarwa zvinotevera.
Iko kutungamira kweKrkonoše National Park yakapikisa kuitiswa uye yakamanikidza murimi kuti ashandure zvirongwa. "Kubva mugore ra2008, tamboedza kumisa basa," akadaro mutauriri weNational Park, Radek Drahny. "Nehurombo, izvi hazvina kukwanisika, pakanga paine pfungwa dzezvemitemo dzakajeka. Takaedza kunonoka kudzikisira chikamu chechipiri nechitatu, icho takabudirira. zvinhu gumi nemana zviri kuzadzikiswa mumatanhatu, "akasimbisa Drahný.
"KRNAP manejimendi yakumbira Ministry of the Environmental kuti…